Iibso Tababar Is-Bilaabaya Nalka Laydhka Gacanta Tababaraha Muruqa Kubadda - Maraakiibta Bilaashka ah & Cashuur La'aanta | WoopShop®
Color Maya (LED) (madow) madow (siraad) (bac) casaan (siraad) (bac) buluug (siraad) (bac) LED (siraad) madow LED (siraad) buluug LED (siraad) casaan Maya (LED) (Transparent)
Maya (LED) (madow) madow (siraad) (bac) casaan (siraad) (bac) buluug (siraad) (bac) LED (siraad) madow LED (siraad) buluug LED (siraad) casaan Maya (LED) (Transparent)
Is-Bilaabaya Nalka Laydhka Gacanta Iskudhafka Tababaraha Muruqa - Maya (LED) (madow) gadaal baa laga keenay oo markab sida ugu dhaqsaha badan ayuu u soo noqonayaa markuu kaydka ku soo noqdo
Nooca: Kubadda gacanta
Nambarka Moodalka: Awoodda Baaburka Kubadda-0106273
Magaca: Kubad curcurka dhalaalaysa
Midabka: Buluug, Madow, Casaan
Badeecad: Qabashada Qeybta
Isticmaala: Jimicsi Curcurka
Kubbada ku hagaaji labada gacmood, suulka ugu riix dhinaca fallaarta, oo dabac dareemo marka iska caabintu ugu badato.
Curcuradu kolba dhinac ayey u wareegaysaa saacad gees u leexasho ah si ay u dareento iska caabinta ka dhalanaysa kubbadda oo ay xawaareyso curcurka.
Ku qabashada gacanta curcurka hal gacan, qaybta furitaanka ee kore, gacanta kale waxay noqon doontaa madaxa xarigga daloolka bartamaha kubbadda.
Adoo suulka gacanta ku haysta kubbada, kubbadda u sii jeedi, xadhiggu wuxuu si adag ugu duudduuban yahay bartamaha kubbada jeexdintiisa dhexe.
Marka xadhigu ku wareegsan yahay badhtanka kubbadda wareegga, jooji inaad u leexiso xarunta kubbadda. Isticmaal hal gacan si aad kubbadda u xajiso, gacanta kalena si aad dhaqso ula soo baxdo xarigga oo u oggolow xarunta kubbadda inay ku rogmato xawaaraha ugu dhakhsaha badan.
Isla markiiba fur qaybta hoose, qaybta curcurka ee kubbadda, illaa aad dareemi karto xawaaraha kubbadda inay sii wadi karto inay xawaareyso.
Qalabka jimicsiga diirimaad, gaar ahaan dadka isboortiga, sida golf, tennis, squash, cricket, badminton, baseball, bowling, basketball, tartanka, iyo fuulitaanka kale ee bannaanka ee curcurka iyo cayaaraha kale.
Faa’iido u leh fanaaniin badan, sida biyaano, gitaar, durbaan garaac.
Ku habboon shaqaalaha xafiiska, saacado badan darteed, dhaqdhaqaaq yar.
Dhallinyaradu waxay u isticmaali karaan farahooda si dabacsan waxayna leeyihiin xoogaa caawimaad ah oo ku saabsan barashada naqshadeynta, farshaxanka wanaagsan, iyo qalabka muusikada.
Da'da dhexe iyo waayeelka si loo gaaro saameynta daryeelka caafimaadka.
Si fiican ayuu u shaqeeyaa, tayada dhismaha oo adag waana jeclahay laydhadhka! Ku faraxsanahay iibsigan.
Ma ahan tayada ugu sareysa laakiin waa shey wanaagsan.